izay mpitarika ny fikambanana mpiara-mikatsaka ny fahamarinana sy fiainana mandrakizay eto Madagasikara na Fimpimi FFM. Anisan’ny fahamarinana averinay ny hoe tsy tokony ovaina ny anaran’ny avo indrindra izay amin’ny teny hebreo. Mahafantatra izany daholo na mpitondra fivavahana amin’ny fiangonana zokiny na zandriny, hoy izy. Tafavoaka ny malagasy, raha miverina amin’izay foto-pinoana izay. Ny anaran’olona tsy olana fa ilay anarana tokana tsy mety, hoy izy. Ny teny faminaniana dia hoe na iza na iza hiantso ny anarany fa tsy hoe na iza na iza hanova ny anarany. Hebreo ny fihaviantsika Malagasy, hoy ny fanamarihany, ary azonay porofoana izany. Ny finoana ny anaran’ny zanaky ny avo indrindra aminay no mahavonjy. Tsy tonotononina foana io ary natao hianarana, izany hoe, ny olona no tokony hanantona ny mpampianatra toy ny fanatonany ireny fampianarana fiarakodia ireny. Mihoatra lavitra izany no tokony hitadiavany ny fianarana momba io anarana io sy ny lalana ao aminy, hoy hatrany izy. Ny rafi-panjakana ankehitriny dia efa anatin’ny lamina vaovao maneran-tany apetraky ny Franc maçon sy ny Illuminati ary atsy ho atsy dia ho fanjakana tokana, vola tokana, fivavahana tokana no arahana eto ambonin’ny tany. Fanjakan’ny olona manam-bola ary hamongorana ny mahantra io ka ny vahaolana ho antsika eto Madagasikara, satria io fanerena ny olona hanaraka fivavahana tokana sy fametrahana ny marika 666, dia izay miambina, araka ny voasoratra no sambatra. Ny miambina no tokony atao, hoy hatrany izy.